Allbanaadir.com Kala Soco Warar Xaqiiqa ah - News: Daawo Sawirada'' Ciidamo Gurmad ah oo aad u hubeesan gaaray aaga dagaalka Gobolka Shabeelaha Dhaxe
August 18 2017 15:38:02
Daawo Sawirada'' Ciidamo Gurmad ah oo aad u hubeesan gaaray aaga dagaalka Gobolka Shabeelaha Dhaxe
Ciidamada Xooga Soomaaliya ayaa bilaabay howlgal balaaran oo Al-Shabaab looga saarayo Deegaanada iyo Degmooyinka ay ka maamulaan Gobolka Shabeelaha Dhaxe.
Ciidamada Milatariga iyo kuwa AMISOM ayaa horey Al-Shabaab uga saaray deeganao iyo degmooyin katirsan Gobolkaasi, waxa ayna hada wadaan ciidamada Huwanta howlgal kale ay ku doonayaan in Al-Shabaab uga saaraan guud ahaan Gobolka.
A-Shabaab ayaa shalay weerar xoogan waxa ay kusoo qaadeen Ciidamo katirsan Milatariga Soomaaliya oo maalin kahor kala wareegay Deegaanka Ruunir-good ee Gobolka Shabeelaha Dhaxe, Al-Shabaab ayaana weerarkaasi ku dilay askar badan oo katirsan milatariga sidoo kale ku qabsaday hub.
Ciidamo Gurmad ah oo katirsan Milatariga Soomaaliya aadna u hubeesan ayaa ka baxay magaalada Muqdisho kuwaa oo hada gaaray deegaano katirsan Gobolka Sh/Dhaxe, Ciidamada ka baxay Muqdisho waxaa hogaaminaya taliyaha Ciidanka xooga Soomaaliya sareeyo gaas, Maxamed Adan Axmed,.
Sida aan Wararka ku heleyno Ciidamadan ayaa xoojinaa ciidamada Milatariga ee ku sugan aaga dagaalka ee Deegaanka Ruunir-Good ee Gobolka Shabeelaha Dhaxe, waxa ay sidoo kale doonayaan ciidamadan in ay la wareegaan deegaano hor eh oo katirsan Sh/Dhaxe.
Madaxweynaha Soomaaliya ayaa amar ku bixiyay in Cidamada Milatariga Soomaaliya ay bilaabaan howlal ka dhan ah dagaalyahanada Al-Shabaab ee ku sugan qeybo kamid ah Deegaanada iyo Degmooyinka Gobolkaasi.